Gondor Keessatii Walitti Bu'iinsa Uumameen Musliimonni 20 Du'un Himame
FAAYILII - Magaala Gondor
Kaabaa Itiyoophiyaa magaalaa Gondor keessatii sirna awwaalchaa nama hogganaa amantaa Musiliimaa ta’an irratti walti bu’iinsaa raawwateen namoonii hedunn Ajeefamuu isaanii Bulchiinsii naannoo Amaaraa ibsaa baaseen beeksisee jira.
Dhimmaa kana irratti gabaasiinii maddii oduu Rooyoiters baasee akka jedhuttii waliti bu’iinsa kanaan namoonii amnantaa Musiliimaa hordofan 20 du’aniru. Rooyiters maddeewaan hospitaalaa waabeffachuudhaan akka ibsettii namoonii 15 immoo madaawanimoo Hospitaalaa seenaniiru.
Waltii bu’iinsichii kan uumamee namoottan awwaalchaa irra jiran irratti waldaa amantaa Ortodoksii keessaa erga dhakaan darbatamuu jalqabee boodaa akka ta’e kan Eere ibsii Mootummaa naannoo Amaaraa , waltii bu’iinsichii beekaa akaa babaldhatu taasifamee, wal loliinsaa Musilimaa fi Kiristaanaa giduutti taasifame ta’u isaa beeksiseera.
Mootummaan naannoo Amaaraa namoottan balaa kanaa keessaa harka qaban itti gaafatamumatti akka dhiheesuu ibsuu isaa fi gareen Paartii mormitootaa akka hawaasnii tasgabaa’u waamicha tdhiheesuu isaanii gabaasinii Masfin Arragee ibseeraa.
Yaadawwan Ilaali (26)